33 jQuery plugins oo loogu talagalay sawir gacmeedka aad hadda ku dari karto | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | jQuery, Technologies
1 Popup Magnific
3 Gallery Iftiin
4 Galbeedka Blueimp
5 Swipe sanduuqa
8 Gallery xaq ah
11 Sawirka Sawirka
14 Sanduuqa fudud ee fudud
15 Galbeedka S
16 Midaynta Gallery
17 Furimaha Dagaalka
18 Shaxan sawirada
19 JQuery Fleximages
20 Nanogalery 2
21 Gallery dheeli tiran
22 Bootstrap Photo Gallery
23 Iftiinka Lightbox
24 PGWS ayaa muujin
25 Sanduuqa Muuqaalka
28 Sawirka JS
30 Flipping gallery
31 Roobka jquery Roobka
33 SWAPPINGWALL.j Su'aal
Plugin ah dhakhso leh, iftiin leh oo wax ka qabta jQuery kaas oo lagu gartaa waxa ku jira CSS, sanduuqa iftiinka shuruudda leh iyo taageerada loo yaqaan 'High-DPI Retina'.
Qoraal khafiif ah oo jQuery ah loogu talagalay in lagu soo bandhigo sawirro, fiidiyoow iyo waxyaabo kale oo dheeri ah. Waa mid jawaab celin ah oo si buuxda loo beddeli karo. Waxay u isticmaashaa dardargelinta GPU animations-ka waxqabadka wanaagsan.
Qalabka kale ee u qalma inuu ahaado wax ka qabta, qaab ah oo la beddeli karo. Ha iloobin fiidiyowyada HTML5, wadaagga shabakadda, iyo sawirada yar yar ee firfircoon.
Muuqaal muuqaal ah iyo muuqaal sawir leh, taabasho-saaxiibtinimo oo si buuxda customizable. Waxaa sidoo kale loo habeeyay webka iyo mobilada labadaba oo leh shaqooyin is xoqid ama saameyn ku-meelgaar ah.
Plugin ah "Lightbox" oo ku habboon desktop-ka, moobaylka iyo kaniiniga. Waxaa lagu gartaa dhaqdhaqaaqyo, kala guurista CSS iyo taageerada isha marka laga reebo astaamaha kale.
Gallery jQuery ah oo leh saameyn muuqata iyo inay u isticmaasho waxa aan ugu yeerno mid fudud oo leh karti weyn.
Chocolat.js ayaa daryeela dhaqaajiso hal ama dhowr sawir oo bogga ah taasi waxay kusii nagaan doontaa isla bogga.
Gallery xaq ah
Plugin kale oo awood u leh inuu abuuro a gallery oo leh shabakad "xaq ah".
Un lightbox qurux badan oo jawaaba taasna waxaa loo isticmaali karaa in lagu abuuro lakabyo dusha sare ah oo si weyn u shaqeeya cabbir kasta ha lahaadee.
jBox waa qalab kale oo jQuery ah oo mas'uul ka ah abuurista sawir gacmeed qafiif ah, la beddeli karo oo wax laga qaban karo.
Plugin kale jQuery in sawirro u soo qaad shabag jilicsan taasina waxay ku saleysan tahay sawirka Tumblr.
Waxay mas'uul ka tahay abuurista a shabakadda sawirrada "xaq laga dhigay" iyo inay awood u leedahay inay buuxiso dhammaan meelaha bannaan.
Una gallery sawir fududeeyay iyada oo dhammaan astaamahaas aan raadineyno sida wax ka qabashada, taabashada, shabakadda iyo xitaa taageerada kaydinta daruuraha.
Sanduuqa fudud ee fudud
Galbeegga Lightbox loogu talagalay desktop iyo moobiil leh jQuery dhammaan shaqooyinkaas aad raadineyso: waxqabadka, tilmaamaha taabashada iyo waxyaabo kale oo badan.
Sawir gacmeed ka jawaab celiya animations CSS iyo taageerid isweydaarsi iyo dhaqdhaqaaq taabasho labadaba.
Fiidiyowga jQuery ee fiidiyowga iyo muuqaalka muuqaalka sawirada oo la dhihi karo waa sida mid ka mid ah kuwa ugu fiican qaybteeda. Waa waajib dhammaan noocyada astaamaha iyo taageerada sida fiidiyowga.
Plugin ah oo daryeela muuji shaashad sawirro thumbnail ah taas oo ku sii fidineysa horudhac iyadoo leh saameyn aad ula mid ah tan lagu arkay sawirada Google.
Waxaa lagu gartaa muuji sawiro adoo dhaqaajinaya tilmaamaha hareerahooda iyo sidoo kale siyaabo kale oo "loo kiciyo" iyaga.
Qalabka fudud ee fudud wuxuu ku habboon yahay abuurista qolalka leh meelo badan la mid ahaanshaha kuwa Google ama Flickr, mid ka mid ah shabakadaha sawir qaadista heer sare.
Gallery dheeli tiran
Galaalkani wuxuu daryeelayaa si siman u qaybi dhammaan sawirrada inaad ku haysato shabakadda. Sawirradu waxay ku saleysan yihiin cabirka weelka caadiga ah. Sawir gacmeed qumman oo loogu talagalay goobaha isdabamarinta.
Qalabkaan ayaa daryeeli doona si toos ah u sameyso sawir iyada oo ku saleysan liistada liiska sawirada.
JQuery lightbox plugin miisaan hooseeya iyo sawirro jawaab leh.
PGWS ayaa muujin
Un carousel plugin (halkan waxaad ku haysaa liis weyn oo iyaga ka mid ah) iyo sidoo kale gallery iyo slidwshow loogu talagalay jQuery iyo Zepto.
Sawir sawir jQuery ah gabi ahaanba waa bilaash leh albam iyo preloader.
Una muuqaalka muuqaalka yar leh taabasho taabasho ah oo aan cidna uga hari doonin.
Qolalka warfaafinta inaad ku abuuri karto dadaal yar.
Bilow abuurista sawir 3D ah leh wicitaanka JS.
Roobka jquery Roobka
Una iftiinka gallery waana fududahay in la isticmaalo dhiirigelinta raadinta sawirka Google. U adeegso shaashad sawirro thumbnail leh horudhac.
Muuqaal sawir leh jQuery zoom. Mid ka mid ah kuwa hadda ugu badan liiska oo dhan.
Un aad u fudud plugin jQuery iyo inay awood u leedahay inay sameysato galley darbi leh animations si aan kala sooc lahayn u kala beddelaya walxaha Si fudud loo isticmaalo
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » 33 Jquery plugins oo loogu talagalay qolalka sawirada ee aad hadda ka hirgelin karto boggaaga
Waa salaaman tahay: Waxaan doonayaa inaan sameeyo galab-faneed galab ah oo ah MUUQAALO KA TIRSAN SAWIRO, oo aan ka soo jeedin YouTube, laakiin waxaan ku keydiyey pc-ga. Waxaan raadinayaa inaan thumbnail la sameeyo dhaqdhaqaaq markaan markaan dhagsado fiidiyowga wuxuu ka furmaa sanduuqa laydhka ama daaqadda pop-up mana garanayo sida. Mahadsanid
Ku jawaab Claudia
Han Solo boodhadhka filimka cusub waxay u taagan yihiin qaab qoriddooda